New Year ညမွာ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲ လုပ္မယ့္သူေတြကို သတိေပးစကားဆိုလာတဲ့ ေဖြးေဖြး – CHAR TAKE
New Year ညမွာ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲ လုပ္မယ့္သူေတြကို သတိေပးစကားဆိုလာတဲ့ ေဖြးေဖြး
29/12/2021char take0 Comments
မဂၤလာပါ ပရိတ္သတ္ႀကီးေရ သရုပ္ေဆာင္ ေဖြးေဖြး တစ္ေယာက္ အမွန္တရား အတြက္ ရပ္တည္ရင္း တိုက္ပြဲဝင္ေနတာကို အားလံုးသိၿပီးျဖစ္မွာပါ ။
ဒီတစ္ေခါက္မွာေတာ့ New Year ညမွာ ေပ်ာ္ပြဲ ရႊင္ပြဲ လုပ္မယ့္သူေတြကို သရုပ္ေဆာင္ေဖြးေဖြးက အခုလို သတိေပး ေတာင္းဆိုလိုက္ ပါတယ္ ။
ေဖြးေဖြးက ” ေပ်ာ္ပါ … Just Have Fun in Private … Pls Don’t Post… ပုံေလးေတြမတင္နဲ႔ လြတ္လပ္ေရးရမွတင္ဖို့သိမ္းထားေပးပါေနာ္…. Help by not acting like This is Normal… ပုံမတင္ရလို့ ဘာမွ မဖစ္သြားပါဘူး …. PLEASE … 🥺 ” ေရးသားထားပါတယ္ ။
ပရိတ္သတ္ႀကီးေရ အမွန္ တရားအတြက္ မိသားစုနဲ့ ခြဲခြာကာ တိုက္ပြဲ ဝင္ေနရတဲ့ သူရဲေကာင္းေတြ စိတ္အား မငယ္ေစဖို႕ အတြက္ ေပ်ာ္ပြဲ ရႊင္ပြဲ ပံုေတြ မတင္ႀကပဲနဲ႕ ဝိုင္ဝန္း ကူညီ ေပးႀက ပါဦေနာ္ ။ Source ; Phway Phway FB
Unicode … New Year ညမှာ ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲ လုပ်မယ့်သူတွေကို သတိပေးစကားဆိုလာတဲ့ ဖွေးဖွေး
မင်္ဂလာပါ ပရိတ်သတ်ကြီးရေ သရုပ်ဆောင် ဖွေးဖွေး တစ်ယောက် အမှန်တရား အတွက် ရပ်တည်ရင်း တိုက်ပွဲဝင်နေတာကို အားလုံးသိပြီးဖြစ်မှာပါ ။
ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ New Year ညမှာ ပျော်ပွဲ ရွှင်ပွဲ လုပ်မယ့်သူတွေကို သရုပ်ဆောင်ဖွေးဖွေးက အခုလို သတိပေး တောင်းဆိုလိုက် ပါတယ် ။
ဖွေးဖွေးက ” ပျော်ပါ … Just Have Fun in Private … Pls Don’t Post… ပုံလေးတွေမတင်နဲ့ လွတ်လပ်ရေးရမှတင်ဖို့သိမ်းထားပေးပါနော်…. Help by not acting like This is Normal… ပုံမတင်ရလို့ ဘာမှ မဖစ်သွားပါဘူး …. PLEASE … 🥺 ” ရေးသားထားပါတယ် ။
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ အမှန် တရားအတွက် မိသားစုနဲ့ ခွဲခွာကာ တိုက်ပွဲ ဝင်နေရတဲ့ သူရဲကောင်းတွေ စိတ်အား မငယ်စေဖို့ အတွက် ပျော်ပွဲ ရွှင်ပွဲ ပုံတွေ မတင်ကြပဲနဲ့ ဝိုင်ဝန်း ကူညီ ပေးကြ ပါဦနော် ။ Source ; Phway Phway FB